सावधान ! लट्री परेको छ भन्दै तपाईँलाई पनि कसैले ठग्ला ! हेर्नुहोस यसरि ठगिय नेपाली – पुरा पढ्नुहोस्……
सावधान ! लट्री परेको छ भन्दै तपाईँलाई पनि कसैले ठग्ला ! हेर्नुहोस यसरि ठगिय नेपाली
पछिल्लो समय आफूभन्दा टाढा रहेका आफन्त, साथीभाई नजिक बनाउन सामाजिक संजालले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
फेसबुक, ट्विटर, इमो, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले टाढा रहेका आफन्तलाई नजिक बनाउन सहयोग गर्ने गर्छ । कतै भने यसले विकृति, विसंगति पनि बढाउन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कतै धम्की आउँछन् भनै कतै मिठा कुरा गरेर फसाउन खोज्छन् । यस्तै अर्घाखाँची जिल्लामा सामाजिक संजालको प्रयोगबाट एउटा ठगीको घटना घटेको छ ।
अर्घाखाँची जिल्ला भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नं. ७ स्थायी बसोबास् गर्ने सुनिल परियार सामाजिक सञ्जाल इमोमार्फत ठगिएका छन् । फागुन १० गते रोजगारको शिलशिलामा दुबईमा रहेका प्रताप रानाले सुनिल परियार नाम गरेका व्यक्तिलाई तपाईँलाई लट्री परेको छ भन्दै ईमोमार्फत जानकारी गराएका थिए । रानाले परियारलाई २५ लाख लट्री परेको छ, नागरिकताको फोटोकपी पठाउनुस्, भन्दै बैंकको खाता नम्बर मागेका थिए ।
सबै कुराकानी भइसकेपछि तपाईँले त्यो पैसा प्राप्त गर्न केही ट्याक्स पठाइदिनु पर्छ, भनेपछि इमो कम्पनीको नामबाट आएको नम्बरबाट फोन आउँदा विश्वास गरेर आईएमईमार्फत ३६ हजार रुपन्देहीका शैलेन्द्र कुमार बहराईलाई सुनिलले पठाई दिए ।
गएको बिहीबार दिउँसो ३ बजेतिर साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत आईएमई गरेको एक घण्टापछि २५ लाख प्राप्त गर्नका लागि ७५ हजार पठाउन भनेपछि उ परियार दोधारमा परे । सुनिलले दाजु रमेश परियारसँग यो कुरा बताएपछि मात्र आफू ठगिएको थाहा पाए । उनका दाजुले पैसा नपठाउन आग्रह गरे । पहिला आफू ठगिएको थाहा पाएपछि अर्को दिन आफूले पठाएको ३६ हजार कसरी पाउन सकिन्छ भन्दै दुइ भाइ रुपन्देही गए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीमा शैलेन्द्र कुमारको नाममा ठगीको जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले शैलेन्द्रलाई पक्राउ गरी रकम असुली भएको छ । जाहेरी दिएको २४ घण्टा नबित्दै इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीबाट सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीको टोलीले शैलेन्द्रलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायव निरीक्षक विजय धवालले बताउनुभयो ।
Prevदेउवाले रित्याएको ढुकुटी भर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा, एउटै निर्णयले १ अर्व २२ करोड रुपैया राजस्व संकलन
Nextप्रेम बानियाले लियर आय संसारभर छरिएर रहनुभएका प्रिय स्वाभिमानी नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको लागी ”जय स्वाभिमान” (भिडियो सहित)
यी महान आमा जसले आफ्नो शारीरिक अशक्त छोरीलाई बोकेरै ब्याचलरसम्म पढाइन ! छोरीको लागि ल्यापटप किन्न नसक्दा आमाले निकै दुखः मानिन् – हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
नेपाल आइडलकी करिश्माको नया ‘ र्‍याप ‘ गीत सार्वजनिक ! करिश्माको नयाँ अवतार- हेर्नुहोस( भिडियो सहित )
बारा र पर्साका हावाहुरी पिडीतलाई गायिका मिना ढकालले गरिन् सहयोग…